AMBATONDRAZAKA : Manomboka ny asam-pokonolona isaky ny fokontany
Taorian’ny fidinana ifotony nataon’ireo tompon’ andraikitry ny Kaominina notarihin’ny Ben’ny tanàna, Rafidison Louis Felicité sy ny mpiara-miasa aminy nanao ny fanentanana amin’ny hananganan’ny vahoaka ifotony ny Vaomieran’ny fampandrosoana dia efa manomboka sahady amin’izao fotoana izao ny asam-pokonolona. 21 mars 2016
Tafiditra ao anatin’izany ny fisavana ireo tatatra rehetra ao an-tanàna sy ny fanadiovana ny fokontany izay voazarazara ho sektera maromaro.
Dingana lehibe, araka izany, no vitan’ny Kaominina satria tsy mbola nisy hatramin’izay mpitondra nananana io hevitra hampandraisana anjara ny vahoaka hiaraka hirona hanadio tanàna io. Ankoatra ny fanadiovana tanàna dia misy ihany koa ny fananganana tarika mpilalao baolina isam-pokontany izay hifaninana rehefa misy ny lalao hotanterahin’ny Kaominina.
Mba hampihenana ny fidonanam-poana ka mahatonga ny tanora hivarilavo amin’ny fidorohana zava-mahadomelina no antony nanaovana io fananganana tarika isam-pokontany io. Misy ihany koa ny vaomiera manokana miandraikitra izany isaky ny fokontany.
Samy efa manangana ny Vaomieran’ny fandriampahalemana ihany koa ny rehetra amin’izao fotoana izao ka ireny no hiantoka ny fametrahana ny andrimasom-pokonolona. Nanambara ny avy eny amin’ny fiadidiana ny Kaominina fa santatra am-bavarano ihany ireo rehetra ireo fa mbola betsaka ny hetsika atao hoentina manentana ny vahoaka ahafahany mandray anjara mivantana eo amin’ny asa fampandrosoana an’Ambatondrazaka .